မြစ်ဆုံ: လူသားများ၏ကျေးဇူးရှင်များနေ.(သို.)မေဒေး နေ. သမိုင်း
လူသားများ၏ကျေးဇူးရှင်များနေ.(သို.)မေဒေး နေ. သမိုင်း
မေဒေး နေ.ဟု ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်း လူတိုင်း သိကြပေမယ်. ဘယ်လို ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကတော. လူတိုင်း သိမည် မဟုတ်ပါ။ အလုပ်သမားတွေဆိုသာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ၊ နေရာတိုင်းမှာ ရှိသည်.အတွက် ဒီနေ.ကိုတော. လူတိုင်း သိထား ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ဖြစ်သင်.သည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆသည်.အတွက် ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ. တာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပါရစေ။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီသတင်းစာလေးကို မဖတ်ခဲ.သည်.အချိန်တိုင်အောင် မေးဒေးနေ. ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာသည်ဆိုတာကို သဲသဲကွဲကွဲ မသိပါ။
အလုပ်သမားတွေဆိုတာ အမှန်တော. ကျွန်တော်တို. လူသားတွေ အားလုံးရဲ.ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ သူတို.တွေ ရှိလို. ကျွန်တော်အားလုံး နေ.စဉ်ဘ၀တွေမှာ အဆင်ပြေချောမွေ.နေတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို.မရနိုင်တာ အမှန်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မှီစက်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လိုဘဲပေါ်ထွက်လာပါစေ ကျွန်တော်တို. အလုပ်သမားထုကို အားကိုးနေရအုန်းမှာဘဲ ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားဟု ဆိုလိုက်လျှင် အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်သမားက အစ အာကသနယ်ပယ်များအထိ အလုပ်လုပ်သော သူများအားလုံးကို အလုပ်သမားဟု ခေါ်ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ.သော ၁၉ ရာစုတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအရင်းရှင်ကြီးများက အလုပ်သမားများအား အလုပ်ချိန် မတန်တဆ ခိုင်းစေရမှ အလုပ်သမားအုံကြွမှုကြီးဖြစ်ကာ အလုပ်သမားနေ. ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၈၈၉ ခုနှစ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို.တွင် ကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအသင်းချုပ်ကြီး၏ ဒုတိယအကြိမ် ညီလာခံက အမေရိကန်အလုပ်သမားများ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ.သော မေ ၁ ရက်နေ.ကို ကမ္ဘာ.အလုပ်သမားနေ.အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် တညီတညွတ်တည်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ရာမှ ကမ္ဘာ.အလုပ်သမားနေ.ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရ
ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ. ထိုအချိန်မှစ၍ အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်ချိန်မှာလည်း တစ်နေ. ၈ နာရီအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခဲ.ပေသည်။
မည်သည်.အလုပ် တစ်ခုကို လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ အလုပ်သမား ပင်ဖြစ်သည်။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ၌ လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရုံး၌လုပ်ကိုယ်သည် ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိက အလုပ်အကိုင် လုပ်သည်ဖြစ်စေ အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေလျှင် အလုပ်သမားပင်ဖြစ်သည်။ ကာယ နှင်.့ လုပ်သည်ဖြစ်စေ ဥာဏနှင်.လုပ်သည်ဖြစ်စေ အလုပ်သမားပင် ဖြစ်သည်။ ထိုအလုပ်သမားတို.သည်ကား လူ.ဘောင် ကောင်းကျိုးအတွက် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို.ကို ထုတ်လုပ်ပေးနေကြသည်။ ထို.ကြောင်.ပင် အလုပ်သမားတို. ၏ ကျေးဇူးကား ကြီးမားလှပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိရှိသမျှသောအဆောက်အအုံများ၊အ၀တ်အထည်အသုံးအဆောင်များမှအစ ယဉ်မျိုးစုံအထိအဆုံး အားလုံးသောအရာရာတိုင်းသည် အလုပ်သမားတို.၏ တီထွင်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု ၊တည်ဆောက်မှုမှတစ်ဆင်. ပေါ်ထွန်းလာရပေသည်။ ယနေ.လူသားများ ခေတ်မီစွာနေထိုင်နေကြခြင်းသည်
ပင်လျှင် အလုပ်သမားများ၏ ကျေးဇူးတရားများနှင်. မကင်းပေ။ အဘယ်ကြောင်.ဟူမူ အလုပ်သမားတိုင်းသည် ဘ၀ရပ်တည်မှု တစ်ခုအတွက် အလုပ်လုပ်နေကြသည်ဟု ဆိုပင် ဆိုငြားသော်လည်း လူသားကောင်းကျိုးအတွက် မိမိ၏ခွန်အားနှင်. အကြံဥာဏ်များကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းကြောင်.ပေတည်။
ထို.ကြောင်.ပင် ပြည်သူတရပ်လုံးက အလုပ်သမားများ၏ စွမ်းပကားကို လေးစားဂုဏ်ပြုကြရ၏။ လူမှုစီးပွားဘ၀တိုးတက်မြင်.မားရေးအတွက်ဖြည်.ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြရ၏။အားပေးချီးမြှောက်ကြရ၏။
အလုပ်သမားတို.၏ဘ၀ကိုစာနာထောက်ထားခြင်းဖြင်. တတ်စွမ်းသရွေ. ဖေးမကူညီပေးကြရ၏။ အလုပ်သမားတို.၏ ကျေးဇူးကား ကြီးမားလှပေသည်။
သို.ဖြစ်ပါ၍ လူတိုင်းလူတိုင်းသည် အလုပ်သမားတို.၏ကျေးဇူးနှင်. မကင်းပေ။ တိုက်ရိုက်သော် လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင်.သော်လည်းကောင်း ကျေးဇူးကားရှိ၏။ ထိုကျေးဇူးတရားများကို လူတိုင်းသတိမူစေခြင်းအား နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း မေလ ၁ ရက်နေ.ရောက်လေတိုင်းအလုပ်သမားနေ.ခေါ် မေ
ဒေးနေ.ကို သတ်မှတ်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို.ကြောင်.ပင် အလုပ်သမားနေ.သည်ကား မမေ.အပ်သော နေ.တစ်နေ. ပင်ဖြစ်ပါ သည်။
( မေလ ၁ ရက်နေ.ထုတ် မြန်မာ.အလင်းသတင်းစာမှ အယ်ဒီတာ အာဘော်ကို ပြန်လည်ကောက်နှုတ် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည် )
Posted by မောင်မောင် at 14:19
ဟုတ်ပါတယ် မမေ့အပ်တဲ့ ရက်မြတ်မေဒေးလေးပါ...ဒါပေမဲ့ သားသားအခုအလုပ်ဆင်းနေရတယ် ဟိ
Спасибо, брат за знание о Дне мая. ;}
အမေရိကန်ကနေ အလုပ်သမားနေ့ပေါ်ပေါက်လာပေမယ့် မေဒေးနေ့စတိတ်မှာ မပိတ်ဘူး..လေတယ်
လေ့လာသင့်ဖတ်ရှု့သင့် သိသင့်တာမို့ သေချာကိုဖတ်သွားတယ် မောင်မောင်ရေ
ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ.ရတဲ. လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်၏ မဲဇာတောင်ခြေ
မဲဇာသစ်တောဖွဲ့ ၁။ မဲဇာတောင်ခြေ၊ စီးတွေတွေတည်း၊ မြစ်ရေ၀န်းလည်၊ မြိုင်တောဆီက၊ ရွှေပြည်ကိုသာ၊ တ-ရှာတော့မိ၊ မိုးရှိရှိလျှင်၊ သ...